Bit By Bit - Hordhac - 1.4.2 xog badan kakanaanta
Cilmi Complex marnaba qancin karo qof wax la yaab leh. Haddii aad daryeesho ku saabsan beddelo maskaxda, ka dibna aad cilmi waa in ay ahaataa mid fudud.
cilmi Bulshada ee da'da digital inta badan la xidhiidha kakanaanta, sida algorithms fanaaniinta cusub iyo Kombuyuutarada casri ah. Tani waa nasiib darro, maxaa yeelay, cilmi bulsho ugu qancin inta badan waa fudud. Si aad u noqoto cad, cilmi baaris fudud ma aha mid ah sida cilmi-fudud. Dhab ahaantii, waxa ay inta badan waa dhib badan si ay u abuuraan cilmi fudud.
Sababta ugu muhiimsan in ay door bidaan cilmi fudud waa in ay tahay sida kaliya ee ay u abuuraan la aamini karo, natiijooyinka aan la filayn. Tusaale ahaan, qiyaasi in aad kaliya cilmi baaris qaar ka mid ah iyadoo la isticmaalayo habka cajiib ah oo adag. Haddii natiijada waafaqayaan filasho, markaas waxaad iyaga ku badan tahay aqbali doonaa. Laakiin, haddii natiijada aad tahay waxa aad la filayaa kala duwan, aad leedahay labo doorasho: aqbalaan natiijada lama filaanka ah ama shaki habka ugu qalafsan. Malahayga waa in aad wax intaas ka sii badan tahay in ay shaki habka ugu qalafsan. Tani macno kaamil ah, laakiin waxa ay ka dhigan tahay in hab ka sii adag, oo ka yar tahay waa in ay soo saaraan natiijo lama filaan ah in aad si dhab ah u rumaysan doontaan. Halkaa marka ay marayso qaar ka mid ah, hababka noqon kartaa si adag in natiijooyinka oo kaliya in aad rumaysan karo waa kuwa aad u dhigma laga filayo. Halkaa marka ay marayso in, cilmi baaris ayaa laga badiyay wax aad u muhiim ah, cilmi ahaan waa in ay awoodaan in ay maskaxdaada beddesho.
Dhibaatadu waxay tahay in aan kaliya ku tilmaamay waa ka sii daran marka aad bilowdo isku dayaya in ay bedesho qof kale ee maanka. Bal qiyaas bandhiga gabal cajiib ah oo adag cilmi in uu leeyahay natiijo lama filaan ah qof kale. Qofkaas oo kale ayaa qaatay bilood qoraal aad code oo ku shaqeeya xogta si marka ay soo food leh doorashada ee aqbalayaan natiijada lama filaanka ah ama aan shaki lahayn habka ugu adag, ay hubaal socday shaki habka ugu qalafsan. Haddii aad daryeesho ku saabsan qanci qof kale in ay baddalaan maskaxdooda, ka dibna aad cilmi u baahan yahay in uu noqdo mid fudud.
cilmi Simple ka taam ah dabiiciga ah ee u dhexeeya su'aal iyo xogta yimaado; in si kale loo dhigo, design cilmi wanaagsan. design cilmi Poor, si kastaba ha ahaatee, waxay keenaysaa in kakanaanta fool ka soo iskala xogta aad su'aasha ah, oo ayan iyagu yihiin iyo sidoo kale ku habboon. Buugani wuxuu diiradda saarayaa laba waji si ay u abuuraan taam ah dabiiciga ah ee u dhexeeya su'aal iyo xogta. First, kitaabkan kaa caawin doona inaad weydiiso su'aalo macquul ah xogta aad. Second, kitaabkan kaa caawin doona inaad ururiyaan xogta saxda ah si uu uga jawaabo su'aashaada.